World Sight Day - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အခုဒီစာကို ဖတ်နေချိန်မှာ သင်ဟာ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင် ကိုရရှိထားတယ်ဆိုတာကို သိထားပေးပါ။
အခုအချိန် မှာသင်ကဒီစာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖတ်လို့ရနေပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးပေါ်က လူတချို့တွေမှာ အဲ့လိုဖတ်ဖို့ အခွင့်အရေး မရကြပါဘူး။
ကျွန်မမှာ ငယ်စဉ်ဘဝထဲက လက်ဆောင်ရထားတဲ့ Myopia ဆိုတဲ့ အဝေးမှုန်ခြင်း အမြင်ပြဿနာနဲ့ နေသားကျခဲ့ရပါတယ်။ အချိန်ပြည့်မျက်မှန် တပ်ထားရခြင်းဟာ မျက်မှန်တပ်ဖို့ မေ့ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ အဆင်ပြေမှု တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့တာ ပိုမိုသိသာလာရပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာ ကို့အတွက်တော့ မှုန်ဝါးဝါး ဖြစ်နေပြီး နည်းနည်းလှမ်းတဲ့ အရာတွေကို လှမ်းပြီးကြည့်မည်ဆိုလျှင်တောင် မျက်ဝန်းလေးကို အားစိုက်ပြီးကြည့်ရတဲ့အခိုက်အတန့် တွေဟာ အဝေးမှုန်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်တွေပေါ့…
☕ ကော်ဖီပူပူကို မျက်မှန် မချွတ်ပဲ သောက်ချင်တယ်။
🙋‍♀️ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ဆုံရင် ကိုယ်ကအရင် ခေါ်ချင်တယ်။
🚍 Air-Con (အခန်း(သို့) ကား) ကနေအပြင်ထွက်ရင် ရေငွေ့ရိုက်လို့ ဘာမှမမြင်ရတဲ့ အဖြစ်တွေကနေ လွတ်ကင်းချင်တယ်။
လမ်းမှာသွားရင်း ခင်မင်လို့ လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်တက်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ “ခေါ်တာတောင် ချေတယ်နော်! အပြန်အလှန်လေးတောင် မနှုတ်ဆက်ဘူး” ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေအောက်မှာ
“မျက်မှန်မပါရင် တကယ်ကို မမြင်ရလို့ ပါ။ မြင်တာတောင် နှုတ်မဆက်တာမဟုတ်ရပါဘူး” လို့ အဖြစ်မှန်ကိုရှင်းပြရင်း တောင်းပန်ခဲ့ရတာပါ။
ဒီလိုမျိုး မျက်မှန်မဖြစ်မနေ တပ်ရမယ့် အဖြစ်အနေနဲ့မဟုတ်ပဲ သူများတွေလိုမျိုး တန်းတူ မြင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့ အချိန်တွေသာ နောက်ပြန်သွားပြီး ပြောင်းလဲလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။
ဒါ့ကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့လည်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အနူးညံ့ဆုံး အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ မျက်လုံးကို ကျန်းမာနေအောင် အမြဲဂရုစိုက်ဖို့ သတိမမေ့နဲ့နော်…
ဒီနေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ World Sight Day မှာမျက်လုံးကို ဘယ်လို အမြဲဂရုစိုက်ရမည့် အချက်လေးတွေကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးထားလို့ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအဖော်တွေကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေဖို့ မမေ့နဲ့နော်…
Take care of your eyes! 👀Don’t make yourself regret🤧